ဘာဘဲဖွဈဖွဈ အမကေို့ပါ ကူးခငျြ ကူးပါစတေော့ သမီးလေး နဲ့ အတူ အမဘေေးမှာ ရှိနပေေး မယျနျော – Let Pan Daily
ဘာဘဲဖွဈဖွဈ အမကေို့ပါ ကူးခငျြ ကူးပါစတေော့ သမီးလေး နဲ့ အတူ အမဘေေးမှာ ရှိနပေေး မယျနျော
ထုတျပွနျထားတဲ့စညျးကမျးတှလေိုကျနာကွပါ ပတျဝနျး ကငျြက ဘဝတှေ ခံစားကွကှေဲမှုတှကေို ကိုယျခငျြးစာကွပါ.. “အမဘောဘဲဖွဈဖွဈ အမကေို့ပါ ရောဂါကူးခငျြ ကူးပါစတေော့ ဆရာမတှကေို ပွောပွီးသမီးလေးနဲ့အတူ အမဘေေးမှာရှိနပေေးမယျနျော” တဲ့.. မှတျမှတျရရ ၂၂.၁၀ .၂၀ရကျနေ့ ကိုဗဈကွောငျ့ကနြော့ နှလုံးသားအရငျ့အမာကွီးကို မကျြရညျကအြောငျ ဖနျတီးလိုကျတဲ့ မမေ့ရနိုငျတော့မယျ့ ကွကှေဲစရာနေ့ တနဆေို့လညျးမမှားပါဘူး။
ယ်ခငျ အကွိမျတှလေိုဘဲ Q စငျတာ ကနေ ပိုးမရှိတဲ့သူဆို ပြျောရှငျစှာအိမျပွနျကွ ပိုးတှတေဲ့သူတှဆေို ဆကျလကျနပွေီး နောကျရကျမှာ ကုသရေးစငျတာကို သှားကွရတယျ။ အဲ့နမှေ့ာ ဖွဈသှားတဲ့ဖွဈစဥျလေးပါ… “အမေ! အဖေ! သမီးတယောကျထဲ ဒီမှာ နခေဲ့ရမှာလား ဟငျ” “အေးပေါ့သမီးလေးရယျ သမီးက
ပို့တှလေူ့နာဖွဈနတေော့ ဆေးကုသခံရမယျလေ သမီးလေးရဲ့” “ဟုတျလားဟငျ မရေီး ဖရေီးပွောတာ” “သမီးလေး ဆေးကုသခံလိုကျနျောသမီး ဘာကွောကျစရာမဟုတျပါဘူး ကနျြးမာသှားရငျ အမကေိုယျတိုငျ လာချေါမယျနျော သမီးလေးရယျ တိတျ တိတျ”
“ဟငျ့အငျး ဟငျ့အငျး မလိုကျ ပါရစနေဲ့ မမေနေဲ့ ဖဖေရေယျ နျော သမီးကွောကျတယျ နျော ဖရေီး” ကွကှေဲစရာ ရငျနငျ့စရာ မွငျကှငျးနဲ့ အသံလေးတှကွေားမှာ ကနြျော စီးမြောရငျး စှံ့အနတေဲ့အခြိနျမှာ “ကဲဘာသမီးရယျ… အမေ ရငျခှငျထဲမှာဘဲနတေော့နျော” မိခငျဖွဈသူမှ ခလေးအနားပွနျသှားရငျး “အမဘောဘဲဖွဈဖွဈ အမကေို့ပါ ရောဂါကူးခငျြ ကူးပါစတေော့ဆရာမတှကေို ပွောပွီးသမီးလေးနဲ့အတူ အမဘေေးမှာရှိနပေေးမယျနျော”တဲ့ ဒိထကျကွကှေဲ သပှေဲတှနေဲ့ခှဲခှာ ခံစားကွရတဲ့ ပုံရိပျတှဟော ဘယျလောကျတောငျ ဖွဈနပွေီလဲဆိုတာ…
ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေလိုက်နာကြပါ ပတ်ဝန်း ကျင်က ဘဝတွေ ခံစားကြေကွဲမှုတွေကို ကိုယ်ချင်းစာကြပါ.. “အမေဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမေ့ကိုပါ ရောဂါကူးချင် ကူးပါစေတော့ ဆရာမတွေကို ပြောပြီးသမီးလေးနဲ့အတူ အမေဘေးမှာရှိနေပေးမယ်နော်” တဲ့.. မှတ်မှတ်ရရ ၂၂.၁၀ .၂၀ရက်နေ့ ကိုဗစ်ကြောင့်ကျနော့ နှလုံးသားအရင့်အမာကြီးကို မျက်ရည်ကျအောင် ဖန်တီးလိုက်တဲ့ မေ့မရနိုင်တော့မယ့် ကြေကွဲစရာနေ့ တနေ့ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
ယ္ခင် အကြိမ်တွေလိုဘဲ Q စင်တာ ကနေ ပိုးမရှိတဲ့သူဆို ပျော်ရွှင်စွာအိမ်ပြန်ကြ ပိုးတွေ့တဲ့သူတွေဆို ဆက်လက်နေပြီး နောက်ရက်မှာ ကုသရေးစင်တာကို သွားကြရတယ်။ အဲ့နေ့မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးပါ… “အမေ! အဖေ! သမီးတယောက်ထဲ ဒီမှာ နေခဲ့ရမှာလား ဟင်” “အေးပေါ့သမီးလေးရယ် သမီးက
ပို့တွေ့လူနာဖြစ်နေတော့ ဆေးကုသခံရမယ်လေ သမီးလေးရဲ့” “ဟုတ်လားဟင် မေရီး ဖေရီးပြောတာ” “သမီးလေး ဆေးကုသခံလိုက်နော်သမီး ဘာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး ကျန်းမာသွားရင် အမေကိုယ်တိုင် လာခေါ်မယ်နော် သမီးလေးရယ် တိတ် တိတ်”
“ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း မလိုက် ပါရစေနဲ့ မေမေနဲ့ ဖေဖေရယ် နော် သမီးကြောက်တယ် နော် ဖေရီး” ကြေကွဲစရာ ရင်နင့်စရာ မြင်ကွင်းနဲ့ အသံလေးတွေကြားမှာ ကျနော် စီးမျောရင်း စွံ့အနေတဲ့အချိန်မှာ “ကဲဘာသမီးရယ်… အမေ ရင်ခွင်ထဲမှာဘဲနေတော့နော်” မိခင်ဖြစ်သူမှ ခလေးအနားပြန်သွားရင်း “အမေဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမေ့ကိုပါ ရောဂါကူးချင် ကူးပါစေတော့ဆရာမတွေကို ပြောပြီးသမီးလေးနဲ့အတူ အမေဘေးမှာရှိနေပေးမယ်နော်”တဲ့ ဒိထက်ကြေကွဲ သေပွဲတွေနဲ့ခွဲခွာ ခံစားကြရတဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာ ဘယ်လောက်တောင် ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာ…
ကလေး ဘဝက နိဗ္ဗာန်ဘုံ (သို့) ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အပစ်ပယ်ခံ နေရာတစ်ခု